Muxuu sharcigu ka qabaa in Farmaajo uu weli joogo Villa Somalia? (Dhageyso) - Caasimada Online
Home Warar Muxuu sharcigu ka qabaa in Farmaajo uu weli joogo Villa Somalia? (Dhageyso)
Muxuu sharcigu ka qabaa in Farmaajo uu weli joogo Villa Somalia? (Dhageyso)
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa 7-dii Febraayo 2021 ka dhammaaday muddo xileedkiisi dastuuriga ahaa, iyada uusan jirin heshiis laga garay hanaankii doorashada dalka.
Si kastaba, arrintan ayaa ka dhigan in sharciga u ogolaanayo in madaxweyne Farmaajo uu sii joogo Villa Somalia, ilaa inta ay saamileyda siyaasadu ka gaarayaan heshiis lagu aado doorasho, mana cada qaabka ay wax u dhici doonaan, maadama ay mucaaridku arrintaas ka biyo diidan yihiin.